सावधान ! मान्छेकाे दाह्रीमा हुन्छ कुकुरको शरिरमा भन्दा बढि किटाणु – सडक मिडिया
सावधान ! मान्छेकाे दाह्रीमा हुन्छ कुकुरको शरिरमा भन्दा बढि किटाणु
स्वीजरल्यान्ड हिर्सल्यान्डेन क्लिनिकका प्राध्यापक आन्द्रेस गटजेट र उनको टिमले १८ मानिस र ३० कुकुरमा यस किसिमको अध्ययन गरेका थिए । जहाँ १८ देखि ७६ वर्ष उमेर समुहका दाह्री पालेका मानिसहरुमाथि अध्ययन गरिएको थियो । उनले कुकुरको शरीर र रौँ मा भन्दा मानिसहरुको दाह्रीमा बढी घातक जीवाणुको संख्या भेटिएको बताएका छन् । साभार
कति जनाले पढें ? 442
Previous Post: भारतमा भयावह बन्दै काेराेना, एकै दिन थपिए ५७ हजार सङ्क्रमित
Next Post: काेराेनाकाे उच्च जाेखिममा काठमाडौं, दैनिक हजाराैँ व्यक्ति भित्रँदै